Iimpawu zeRfid, iKhadi leRfid, Ibhendi yeRfid yeWristband - iToptag
Ithegi yentsimbi yeRFID
Inqaku leRFID leNkunkuma
Iphepha leWristband yePVC
Isilwanyana / isilwanyana iMicrochip
Njengomvelisi weemveliso zeRFID, sinikezela ngeemveliso ezilungileyo.
INKONZO EBALULEKILEYO YOKUZENZA
Iqela lokuthengisa leToptag linokubonelela ngeziphakamiso zobungcali kwiimfuno zakho ezizenzekelayo. Sinikezela ngeesampuli zasimahla kuvavanyo lwakho.
I-Toptag ihlala ilungiselela inkqubo yokuvelisa, ukunciphisa iindleko zokuvelisa, kunye nokuphucula ukusebenza kwemveliso, ukubonelela abathengi ngomgangatho olungileyo kunye neemveliso ezingabizi.
ngaphezulu kweminyaka engama-20 yamava emveliso, abasebenzi abangama-2000, amaqela angama-10 e-R & D kunye nemigca ephezulu yokuvelisa amakhadi kunye neethegi. I-Toptag inikezela kwi-R & D, ukuvelisa kunye nokuthengisa iimveliso zeRFID kunye nesisombululo seRFID.
Sinikezela ngeentlobo ezahlukeneyo zeethegi zerfid kwisicelo esahlukileyo. Sakha iimveliso ezintsha zeRFID ngokweemfuno zabathengi ...
Abathuthi beToptag banceda ekuqinisekiseni ukulandeleka ngaphandle komthungo kunye nokunciphisa ilahleko, ngelixa liphucula ulawulo lwesitokhwe kunye nesantya sokulungisa. Iimpawu ezinqabileyo zokunxibelelana neRFID ziphucula isantya sokuqokelela idatha kunye nokuchaneka, zisenza ukuba kulandelwe iindleko ngakumbi ngelixa kusonyuswa ukuchaneka.
Isebenzisa itekhnoloji yeRFID ukulawula ngokufanelekileyo iilinen zorhwebo okanye zabucala, iimpahla okanye iimethi, zokwenza uluhlu lweempahla kunye nokunciphisa impazamo yomntu kwiinkqubo zokuhlamba kunye nokubiza. I-Toptag inobudlelwane bexesha elide noHilton, Marriot.
Ulawulo lweRFID yokuhlamba iimpahla
Itekhnoloji yomsetyenzana ngaphandle kwamacingo iye yangumgangatho kwiminyhadala yomculo welizwe, kunye nabalandeli abanxibe ibhanti yabo ye-RFID unyaka wonke njengeebheji zembeko. I-Toptag ibibambisene neminyhadala emininzi enje ngeRio festival, i-SnowGlobe Music Festival njl.
Amatikiti oMnyhadala noLonwabo
I-Toptag ineTekhnoloji yokudibanisa phambili yokulawula yonke imiba yamava okhathalelo lwempilo kwindawo eyodwa yeziko lonyango-ulawulo lweendwendwe, ukulandela umkhondo wee-asethi kunye nokubeka iliso kweemeko, iinkonzo zexesha lokwenyani, ukuhlawula amatyala kunye noxolo lwengqondo.
Unonophelo lwezeMpilo lweRFID
Ngamava amashumi eminyaka kuphuhliso lwezisombululo zolawulo lokufikelela olomeleleyo lokufikelela ngokwasemzimbeni nangokwengqiqo, iToptag ithembekile yimibutho noorhulumente ukubonelela ngokhuseleko kunye nezisombululo zokhuselo.
Iimpawu zeRFID zivumela iinkqubo ukuba zichonge izithuthi ukuba zichongwe ngombane ukusuka kwiimitha kude. Izithuthi zinokujongwa ngokuzenzekelayo, kunye nomthwalo ochongiweyo. Banokujongwa kwakhona kwakhona ngokulula. Ngoncedo lweengcali, i-RFID inokubonelela ngendlela ethembekileyo yokuchonga uluhlu olubanzi lwezithuthi, ukuzibeka kwindawo ethile okanye kwindawo ethile kwindawo leyo, ekwasetyenziselwa ukujongana ne-ETC okanye ulawulo lokupaka.
Ukuphawula imfuyo ngeRFID kunokuba sisixhobo esibalulekileyo kwimpahla yomfama yokuchonga isilwanyana ngasinye kunye nemvelaphi yaso kunye nolwazi lonyango. Oogqirha bezilwanyana ngoku banyanzela ukuba zonke izilwanyana zasekhaya zilandelwe kusetyenziswa i-RFID ukuze zenze inkqubo yokuchonga izilwanyana zasekhaya ezilahlekileyo nezifunyenweyo.
I-RFID-on-metal transponders ingaba kuluhlu olubanzi lokulandelwa kweeasethi kunye nokusetyenziswa okubanzi kwemizi-mveliso. Ezona zicelo ziphambili kukulandelwa kweeasethi kwiiseva kunye neelaptops kumaziko eenkcukacha ze-IT, ukulawulwa komgangatho wokuvelisa imveliso kunye nokuvelisa, ukugcinwa kwemibhobho yeoyile kunye negesi, kunye neesilinda zegesi, ukulandelela izixhobo, ukulandelela izixhobo, kunye nolawulo lomgangatho wezixhobo zonyango.
Namhlanje, nokuba kuse-EC kunye namakhadi etyala, ii-ID zamakhadi, iipaspoti okanye amakhadi einshurensi yezempilo, idatha igcinwe kwiitshipsi ezininzi zeRFID, ngoncedo lweapp efanelekileyo, idatha yobuqu inokufundwa ngokufihlakeleyo ziifowuni ezikrelekrele. Amakhadi okuthintela i-Toptag e-RFID anikezela ngokhuseleko oluthembekileyo ngokuchasene nokufundwa okungagunyaziswanga kwedatha kuluhlu lwamaxesha e-13.56 MHz.
Inkampani yethu isekwe ngo-2008 zineeofisi ezimbini eziphambili eziseHong Kong naseShenzhen, China. Inkampani yethu isekwe liqela labantu abanomdla kunye nabayili abanorhwebo olunobutyebi beRFID kunye namava okwenza. Inkampani yethu eneemfuno ezahlukeneyo tags tag RFID kunye neelebhile iimilo ezahlukeneyo kunye nezinto. Iimpawu zethu zisusela kumaza asezantsi ukuya kumaza aphezulu, asetyenziswa ngokubanzi kwicandelo le-NFC, intlawulo yokuhamba, ulawulo lofikelelo, ulawulo lwekhonkco, ukulawulwa kwempahla, ukugcinwa kunye nolawulo lwempahla, ulawulo lwemfuyo njalo njalo.
Ukunyuka kweNtengiso "yeWayini endala", iRFID Retrospential Anti-counterfeing ibonisa iZakhono zayo
Ukutya okumnandi nakho "kukuzazisa", iRFID ifezekisa ubumnandi bendabuko baseCanton